Dhalinyaro dhexda u xiratay badbaadinta ubadka soomaaliyeed ee gobalka Østfold. - NorSom News
Dhalinyaro dhexda u xiratay badbaadinta ubadka soomaaliyeed ee gobalka Østfold.
Warbaahinta qaranka Norwey ee NRK-ga ayaa warbixin ka diyaariyay urur ay isku bahaysteen dhalinyaro soomaaliyeed oo ka dhisan gobalka Østfold, kaas oo ka shaqeeyo sidii ubadka soomaaliyeed ee kunool gobalkaas loogu badbaadin lahaa kooxaha kriminalka ah iyo in laga saacido inay iskuulka dhamaystaan. Mahad Abuukar Osman oo ah gudoomiyaha ururkan oo magaciisu yahay organisasjonen Horn of Africa’s Youth, ayaa sheegay in hamiga guud oo ay u aas-aaseen ururkan uu yahay in bulshada soomaaliyeed, ee ku dhaqan gobalkaas ay noqdaan kuwo isku duuban, waxna la qaybsado bulshoweynta kale ee ku dhaqan Østfold.
Mahad oo sharaxayay sababta ay caruurta soomaaliyeed uga dhacaan iskuulada, ayaa sheegay in sababta ugu weyn ay tahay dhaqaalo yarida soo wajahda caruurtan marka ay iskuulka dhigtaan. Taas oo ku dhalisa hami ah in ay lacag si fudud ku helaan, ugu danbeyna sababi karto inay kamid noqdaan kooxo ka shaqeeyo howlo kriminalitet ah. Dhalinyaradan isku xilqaamay howshaas weyn ee muhiimka ah ayaa siyaabaha ay u dhiirigaliyaan ubadka soomaaliyeed waxaa kamid ah: inay u qabtaan seminaaro ay ku casuumaan aqoonyaho soomaali ah oo wadanka wax ka bartay si ay u ugu dhiiragalayiin inay waxbartaan oo mustaqbalna samaystaan. Waxa ay sheegeen in ilaa hada ay 35 dhalinyaro ah ay iskuulka kusoo celiyeen, halka 12 kamid ahna ay jaamacad sii codsadeen.
Stina Røyrvik oo ka tirsan maamulka degmada Fredrikstad, kana mid ah dadka sida dhow ula dhaqeeyo ururkan ayaa sheegtay in howsho ay hayaan ay tahay mid aad u muhiim, loona baahnaa.
Warkan oo dhamaystiran halkan ka akhri(les saken på norsk her)
Previous articleWasiirka arimaha dibada Soomaaliya iyo Gaafow oo safar shaqo ku joogo Norwey
Next articleDowlada Soomaaliya oo heshiis ku saabsan celinta soomaalida la galayso Norwey